दुई दशकपछि द्विसदनात्मक सदन : आजदेखि संसद्को पहिलो अधिवेशन
काठमाडौँ, फागुन २१ गते । करिब दुई दकशपछि द्विसदनात्मक सङ्घीय संसद्को अभ्यास सोमबार औपचारिक रूपमा सुरु हुँदैछ । जनआन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्वाचित संस्था संविधानसभा एक सदनात्मक थियो र संविधानसभाले नै संसद्को पनि काम, कारबाही गर्दै आएको थियो । फेरिएको राजनीतिक पृष्ठभूमिका सङ्घीय संरचनामा प्रदेशसभा पनि कार्यान्वयन आएर अधिवेशनसुरु भइसकेको छ । सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन भने औपचारिक रूपमा सोमबार सुरु हुँदैछ ।
२०४७ को संविधानले द्विसदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरेको थियो । तर, २०५८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस भएपछि उक्त अभ्यासमा ब्रेक लागेको थियो । २०६२/६३ को जनान्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा मात्र पुनस्र्थापना भएको थियो । जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि समेतमा भएको राजनीतिक सहमतिपछि २०६४ वैशाख २८ मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो ।
पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि २०७० मङ्सिर ४ मा पुनः दोस्रो पटक संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको डेढ वर्षमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेको थियो । चारवर्षे कार्यकालमध्येको बाँकी अवधि व्यवस्थापिकामा रूपान्तरित भएको थियो । रूपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल तीन महिना बाँकी रहँदै सङ्घीय संसद््का लागि निर्वाचन भएको हो ।
सदस्यद्वारा शपथ ग्रहण
सङ्घीय संसद््का दुवै सदनका सदस्यरूपले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद््मा हाल कायम रहेका ३३४ सांसदमध्ये ३२६ जनाले शपथ लिनुभएको हो । सङ्घीय संसद््मा प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद हुनुहुन्छ भने राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आइतबार ४ बजे निर्धारित शपथ समारोहमा प्रतिनिधिसभाका २७१ सदस्यले शपथ लिनुभएको छ । राष्ट्रिय पोसाक तथा आ–आफ्ना जातीय पहिचान झल्कने पोसाकमा सांसदहरूले शपथ लिनुभएको हो । शपथ लिएकामध्ये ४४ सांसदले मातृभाषामा शपथ लिनुभएको थियो जसमा दश भाषा सामेल छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यरूपलाई ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले शपथ गराउनुभयो । यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टीका महिन्द्र राय यादव ज्येष्ठ सदस्य भएको भन्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सोही अनुसार तयारी गरेको थियो । अस्वस्थताको कारण देखाउँदै यादव अनुपस्थित भएपछि ठाकुरले शपथ गराउनुभएको हो ।
संसद््का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सांसदलाई स्वागत गर्दै शपथका लागि ज्येष्ठ सदस्यलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । शपथ लगत्तै संसद्् सचिवालयले सांसदहरूलाई सचिवालयले उपलब्ध गराएको सङ्घीय सांसदको लोगो प्रदान गरेको थियो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसार प्रतिनिधिसभाको शपथ समारोहका चार सांसद अनुपस्थित रहनुभयो । जसमा राजपाका महिन्द्र राय यादव र रेशम चौधरी हुनुहुन्छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी र धर्मशीला चापागाईँ पनि अनुपस्थित रहनुभयो ।
यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्यरूपले ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो । राष्ट्रियसभाका कूल ५९ सांसदमध्ये चार जना शपथ समारोहमा अनुपस्थित रहनुभयो ।
सरकारद्वारा सिफारिस तीन सदस्य सर्वोच्चको आदेश अनुसार अनुपस्थित हुनुभएको हो । अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेल अदालतको आदेशका कारण अनुपस्थित हुनुभएको हो । यस्तै, सांसद रमेश यादव पनि शपथ समारोहमा अनुपस्थित रहनुभयो ।